Guinée-Conakry: Mijoro tsy milefitra manoloana filoha tia fahefana tafahoatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 7:55 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nanglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2007)
Manomboka mahazo vahana ao Afrika Andrefana ny fivoarana teknolojika ahafahan'ny olontsotra mandrakitra lahatsary sy mametraka lahatsary ety anaty aterineto. Hatramin'ny anio izahay tsy mbola nampiditra lahatsary avy any amin'io faritra iray eto amin'izao tontolo izao io ho ao anatin'ny tranonkalanay natokana ho an'ny lahatsary miresaka zon'olombelona. Amin'ity herinandro ity, atolotray ho anareo ny lahatsary iray tsy fahita firy nahavita tonga tety anaty aterineto avy any Guinée, firenena iray miteny frantsay izay i Conakry no renivohitra, niaina fahirano nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa, ary toerana toa itohizan'ny tolona ho amin'ny fizakantena sy ny fandriampahalemana maharitra
Asehon'ity lahatsary ity ny tafika gineàna eo am-pitifirana vahoaka naneho ny tsy fahafaliany tsy mitsahatra mitombo manoloana ireo fitondrantena tsy refesimandidy ataon'ny filoha Lansana Conté . Sarobidy ny fijoroana vavolombelona anaty lahatsary tahaka izany satria sarotra tadiavina ny feon'ireo olompirenena ao Guinée eny anaty tontolon'ny bilaogy. Ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra ao amin'ny bilaogy Guinea In Crisis dia avy amin'ireo maosivohom-baovao iraisampirenena sy ireo bilaogera avy aminà firenena afrikàna hafa.
Tamin'ny herinandro lasa, nangonin'i Jen Brea, mpiaramiasa amin'ny Global Voices, ny famintinana tonga lafatra an'ireo bilaogy miresaka ny korontana ao Guinée. Tonga tamin'ny faratampony ilay krizy rehefa injay ny filoha nametraka ny lalàna miaramila sy nanaparitaka ireo tafi-panjakana mba hamerenana ny filaminana. Valin-kafatra nahafatesana olona maherin'ny 110, izay ny ankamaroany dia tanora sy ankizy matim-bàla teny amin'ireo arabe tao Conakry. Nampitandrina ny mety ho fiparitahana malakin'ny korontana, miaraka amin'ireo vokadratsy mety ho aterany, ireo fikambanana toy ny International Crisis Group, raha toa tsy misy fiovàna mivaingana mipoitra ao Guinée. Eny an-toerana, lavin'ny fiarahamonina sivily ny hilavo lefona. Niafara tamin'ny fampiatoana ny fitokonana faobe tamin'ny 25 febroary 2007 sy fanendrena an'i Lansa Kouyate ho praiminisitra – heverina ho olon'ny marimaritra niraisana – ny fanoherana hentitra nataon'ireo mpitarika sendikaly sy ny vahoaka an'ilay lalàna miaramila, fanoherana notohanan'ny tao amin'ny parlemanta gineàna.
Araka ny voamarik'i Alice Baker, mpamoaka ny lahatsoratra amin'ny teny frantsay ato amin'ny Global Voices, tamin'ny herinandro lasa, ambaran'ilay senegaly bilaogera Alex Seck ankehitriny ny fivoahan'i Guinée tamin'ilay krizy. Saingy mbola ilaina mandrakariva ny fitandremana: tsipihan'ireo mpitarika sendikaly sy ireo mpiaradia aminy iraisampirenena fa tsy maintsy mailo hatrany manoloana io fiverenana amin'ny laoniny hita ao Guinée io.
Raha ireo tantaran'ny fifandirana vao haingana tany amin'ny zana-paritra ao afrika andrefana no atao fototra iaingàna, betsaka ny lohahevitra mbola mijanona ho mampiahiahy. Hatry ny taona maro ny saina no efa voasarika tamin'ny mety hahalasa an'i Guinée ho firenena miaina anaty herisetra atsy ho atsy.
Ny ady any amin'ireo firenena mifanakaiky aminy, toa an'i Liberia, Sierra Leone, ary Côte d’Ivoire, dia nametraka an'i Guinée ho toy ny toerana fialofana ho an'ireo mpitsoaponenana an-jatony maro. Saingy ao anatin'ny hamaroan'ireo mpitsoaponenana marobe mitobaka mameno ny sisintany efa mitsingilahila ao Guinée dia nisy ihany koa ireo mpiady fahiny tany amin'ireo ady teo akaiky teo, izay mety ho mora foana ny handraisana azy hanao habibiana vaovao indray. Efa an-taona maro ireo mpandinika erantany no nijery izay fomba hatao manoloana ny mety ho fifandirana hitranga ao Guinée sy ny ho fisian'ny krizy amin'ny maha-olombelona ao amin'ilay faritra, raha tsy mitsahatra mitombo ihany koa ny ahiahy momba ny toedraharaha marefo ao amin'ny Faritra Rakotra Ala ao Guinée, izay mety ho lasa ihany koa foibenà korontana. Na izany aza, mbola ny tsy fahampian'ny fitantanana politika sy ny tsy fahombiazan'ny governemanta am-perinasa ihany no tondroina ho rangory fototry ny fifandonana ao amin'io zana-paritra io.
Iza no sahy hibedy ny mpitarika iray toa an'i Conté, rehefa lasa tsy hay fehezina intsony ny fironany mankany amin'ny fitondrana lozabe ?
Eto amin'ny foiben'ny tetikasa hanaovana tranonkala ho an'ireo lahatsary miresaka zon'olombelona, tazoninay ny fomba fijery hoe io fanarahamaso demaokratika io dia afaka ampiharin'ny olompirenena tsirairay manana fitaovana maharaka ny teknoljia ilaina mba handraketana ireo fijoroana vavolombelona momba ireo fanitsakitsahana zon'olombelona.
Indrisy anefa, mbola marefo ny fampahalalambaovao eny an-toerana ho an'ireo firenena to an'i Guinée, zara raha misy fitaovana entina maneho na mandefa ireo porofo mahakasika ireny fanararaotana fahefana ireny. Tsy misy ihany koa tontolo mendrika ny ho antsoina hoe tontolonà bilaogy gineàna, mahatonga ny tsy fisian'ny tranonkala azo hisafidianana afa-tsy ny AllAfrica.com [En] sy Guineenews [Fr], na ireo bilaogy toy ny Friends of Guinea[En] hahazoana vaovao na fandalinana misy fanavaozana tsy tapaka mikasika ny toedraharaha farany.
Nihanatevina ireny loharano ireny tamin'ny herinandro lasa, niampy ireo bilaogera mazava loatra, izay nasaina handray anjara tamin'ny adihevitra tety anaty aterineto. i Alex Seck [fr] avy ao Senegaly, ohatra, dia nilaza fa efa ambivitry ny fipoahana i Guinée, ary “mahamenatra” ny tsy fahavitan'ny fianakaviambe iraisampirenena manao fanamelohana miaraka na mampiasa tsindry amin'ny filoha Conté. Soratan'ny bilaogin'i Afrika Atsinanana Charcoal Ink fa ireny korontana ireny dia taratry ny fironana politika efa mahazatra ao Afrika: “An-dàlana ny ady fahefana, ary ny fahefana dia io tambavy ody faty matsiro io, izay tsy mety mankaleo velively an'ireo afrikàna mpitarika”
Ho famintinana, ny fanamby natombok'ireo vondrona tanora mpiangaly mozika ao an-toerana no iray amin'ireo tena mahaliana indrindra amin'ny korontana misy ao Guinée, izay ny tena fantatra indrindra dia ny Fonike Collective namokatra rakitsary hip-hop iray mba ho fijoroana vavolombelona amin'ny firaisany hina amin'ireo olompirenena nanohitra ny “fitondrana jadona” ataon'i Conté, ary koa rakitsary reggea iray nalefan‘i ravaschool
Indrisy anefa, toa tsy dia nisy fiantraikany loatra ireny feo tanora avy amin'ny sehatry ny mozika ireny. Ny antony dia noho ny politika ao Afrika Andrefana tsy miraharaha loatra ny hevitry ny daholobe ary tsy misaina afa-tsy ho an'ireo “olomaventy”.
Ankehitriny, ny fanamby mivantana ho an'ny iray amin'ireny “olomaventy” ireny, ny praiminisitra Kouyate, dia ny manararaotra ny fivoahana natolotr'ity vanimpotoanan'ny herisetra ity ho azy. Mba hahafahana mirakitra fivoarana tena mivangana ary hamafàna ireo fikororosian'i Guinée ho latsaka anaty fifandirana, hila ny fanampiana avy amin'ireo mpiaradia aminy avy ao anatin'ny fireneny sy iraisampirenena i Koyate. Alohan'ny zavatra rehetra, tsy maintsy atrehany ireo fanararaotana sy aingitraingitr'ilay filoha tia fahefana tafahoatra, raha tsy tiana ho lasa tsimoka ho anà fifandirana vao mainka handravarava be ao Afrika Andrefana ireo herisetra nisy tamin'ny volana lasa.